Akụkọ - Emechiri ihe ngosi Canton nke 129 nke ọma
Emechiri ngosi Canton nke 129 nke ọma
Ihe ngosi Canton mebere nke 129 bịara na njedebe na Eprel 24. Xu Bing, ọnụ na-ekwuchitere Canton Fair na osote onye isi ụlọ ọrụ China Foreign Trade Center gosipụtara ọnọdụ niile.
Xu kwuru na nke Xi Jinping Thinking on Socialism na-eduzi ya na njirimara ndị China maka oge ọhụrụ, anyị mejuputa ntuziaka nke akwụkwọ ozi ekele President Xi yana atumatu na ntinye aka nke Central Committee of CPC na State Council na-eme ka azụmahịa mba ọzọ guzosie ike. N'okpuru nduzi siri ike nke Ministri Azụmahịa nke PRC na Gọọmenti Gọọmenti Guangdong, na nkwado dị ukwuu nke ngalaba dị iche iche nke gọọmentị etiti, ngalaba azụmahịa mpaghara na ụlọ ọrụ ndị nnọchiteanya China na ndị consulate ndị China na mba ọzọ, na mgbalị siri ike nke ndị ọrụ niile, 129th Canton Fair rụọ ọrụ nke ọma na nsonaazụ dị mma enwetara.
Xu kwuru na ugbu a, Covid-19 ka na-agbasa n'ụwa niile, ebe ijikọ ụwa ọnụ na-agba ọsọ megide ifufe isi. N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na usoro ọkọnọ zuru ụwa ọnụ na-eche mgbanwe dị ukwuu ihu na ejighị n'aka na-arịwanye elu. Isiokwu "Canton Fair, Global Share", ihe ngosi Canton nke 129 mere nke ọma na ntanetị n'ụkpụrụ nke "imeghe, imekọ ihe ọnụ na imeri". Ọ bụghị nanị na ngosi ahụ enyela onyinye kwesịrị ekwesị iji nọgide na-enwe ụda ike nke azụmahịa mba ofesi, na-aga n'ihu na mmepe ọhụrụ nke azụmahịa mba ọzọ na-eduga, na ịgba mbọ hụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ọkọnọ zuru ụwa ọnụ na-adịghị mma, ma tinyekwa nnukwu mkpali n'ime ahia mba ụwa na mgbake akụ na ụba.
Xu webatara na Canton Fair virtual platform arụkwara ọrụ nke ọma. Edobere ogidi ndị a n'elu ikpo okwu, gụnyere ihe ngosi na ngwaahịa, Global Business Matchmaking, VR Exhibition Hall, Exhibitors On Live, News and Events, Services and Support, Cross-Border E-commerce Zone. Anyị jikọtara ọrụ nke online ngosi, ahịa na nkwalite, azụmahịa matchmaking na online mkparita uka na-ewu a otu-nkwụsị trading ikpo okwu na-agbaji oge na ohere maka ụlọ ọrụ si n'ụlọ na mba ọzọ ime azụmahịa na aka ha. Ruo Eprel 24, a gara webụsaịtị gọọmentị Canton Fair ugboro nde 35.38. Ndị na-azụ ahịa si mba na mpaghara 227 debara aha ma gaa ngosi ahụ. Ngwakọta dị iche iche na mba ofesi nke ndị ahịa bịara pụta ìhè ọzọ na uto kwụsiri ike nke ọnụ ọgụgụ ahụ yana mba ndị nwere ndekọ dị elu. Site na usoro cybersecurity larịị-3, webụsaịtị gọọmentị na-arụ ọrụ nke ọma na enweghị nnukwu nchekwa cyber na ihe nchekwa ozi pụtara. Site na ọrụ, ọrụ na ahụmịhe onye ọrụ ka mma, Canton Fair virtual platform nwetara ebumnuche nke "ịdebanye aha, chọta ngwaahịa, na ime mkparịta ụka" maka ndị na-azụ ahịa na ndị na-ebubata ya, ma ndị na-egosi na ndị na-azụ ahịa jara ya mma nke ukwuu.
Ngwaahịa na teknụzụ ọhụrụ wetara dynamism na mebere Canton Fair. Ndị ngosi 26,000 ji nlezianya kwadebe ma gosipụta ngwaahịa ọhụrụ ejiri teknụzụ mgbanwe mgbanwe n'ụdị okike, na-egosi ụwa ike ụlọ ọrụ China na imepụta ihe ọhụrụ yana onyonyo ọhụrụ nke ụlọ ọrụ China na ụdị China yana “Mere na China” na “Ekepụtara na China" ngwaahịa. Na 129th Canton Fair, ndị ngosi bulitere ngwaahịa karịrị nde 2.76, mmụba nke 290,000 n'ime nnọkọ ikpeazụ. Dị ka ozi jupụtara na ụlọ ọrụ, e nwere 840,000 ọhụrụ ngwaahịa, mmụba nke 110,000; Ngwaahịa smart 110,000, 10,000 karịa nnọkọ ikpeazụ. Ngwaahịa mara mma, ọnụ ahịa dị oke ọnụ, teknụzụ dị elu nwere ọnụ ahịa agbakwunyere dị elu, ịzụ ahịa onwe ya na IP na ụdị nwere onwe ya hụrụ uto na-aga n'ihu, yana ngwaahịa dị elu, smart, akara, na ahaziri iche dị ka isi mmalite. Ụlọ ọrụ 340 esenidụt si mba na mpaghara 28 bulitere ihe karịrị 9000 ngwaahịa. Nchịkọta ngwaahịa mara mma dọtara ndị na-azụ ahịa ụwa ka ha mee mkparita uka. Ụlọ ngosi ihe ngosi nke ọma dọtara mkpokọta nde mmadụ 6.87, yana nke National Pavilion 6.82 nde nleta, na International Pavilion 50,000 nleta.
Ndị na-azụ ahịa na ndị ngosi nakweere nkà ihe ọmụma na ụdị ọhụrụ. Dị ka nnọkọ mebere nke atọ, 129th Canton Fair nyere ndị ngosi ike na ikpo okwu Internet Plus. Ekele maka nnọkọ abụọ gara aga, ndị ngosi nwere nghọta miri emi banyere ahịa dijitalụ na mgbasa ozi ndụ. Na nnọkọ 129th, ha nwere ike igosipụta ngwaahịa n'ụdị dị iche iche ma nye ọrụ ndị ahịa dị iche iche. E lere iyi ndị a dị ndụ ugboro 880,000. Site na akụrụngwa mgbasa ozi ndụ kachasị mma, ndị ngosi akwadoro nke ọma na ọdịnaya mgbasa ozi ndụ ezubere iche. Site na nkwanye ndụ na mmekọrịta ha na ndị na-azụ ahịa, ndị ngosi nwetara nghọta ziri ezi nke ihe ahịa chọrọ, ya mere na-aga n'ihu R&D na ịzụ ahịa n'ụdị ezubere iche. Na nkezi, a na-ekiri iyi ndụ ọ bụla 28.6% karịa oge ikpeazụ. Ụlọ ihe ngosi VR, ebe ụlọ ntu VR nke ndị na-eme ihe ngosi dị, hibere dabere na ụdị ngwaahịa iji nye ahụmahụ na-adọrọ adọrọ maka ndị na-azụ ahịa. Ndị ngosi 2,244 haziri ma bulite ụlọ ntu 2,662 VR, nke a gara karịa ugboro 100,000.
Ahịa ọhụrụ na ihe ọhụrụ chọrọ nyere atụmanya na-egbuke egbuke. Ndị na-eme ihe ngosi jiri uru nke ụlọ na nke mba ụwa na akụrụngwa site na Canton Fair, mejuo ihe ọhụrụ chọrọ n'ahịa abụọ ahụ ma nye aka na mgbasa ozi abụọ. A rụpụtara nsonaazụ na-amị mkpụrụ n'ahịa ọdịnala ebe enwere mmekọrịta chiri anya na ahịa ndị na-apụta. Ụlọ ọrụ ndị China na-arụsi ọrụ ike n'ịchọgharị ahịa ụlọ. N'oge ngosi ngosi Canton nke 129, anyị kwalitere ọkpụkpọ oku nke ndị na-azụ ụlọ. Ndị na-azụ ahịa ụlọ 12,000 debanyere aha, gara ngosi ahụ wee malite ozi ngwa ngwa ugboro 2400, na-enyefe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 2000 ịrịọ arịrịọ. Anyị ewerela usoro dị iche iche iji jikọọ azụmaahịa ụlọ na azụmaahịa mba ofesi, kwalite ire ngwaahịa ngwaahịa ndị emepụtara maka mbupụ, ma nye ndị na-eme ihe ngosi ohere iji nweta nnukwu ohere sitere n'ịkwalite mkpa ụlọ na nkwalite oriri. Ya na Ngalaba Azụmahịa nke Guangdong Province na ụlọ ọrụ azụmaahịa dị mkpa, emere mmemme “ịkwọ ụgbọ ala na azụmaahịa mba ofesi na okirikiri abụọ” nke ọma. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ngosi 200 na ndị na-azụ ahịa ụlọ karịrị 1,000 sonyere na egwuregwu egwuregwu na saịtị. Ndị ngosi nyere nzaghachi dị mma na ọ bụ mmemme na-arụpụta ihe.
A na-eme egwuregwu n'ahịa n'ụzọ amamihe na nke ziri ezi karị. Anyị na-ebuli atụmatụ nke nhazi arịrịọ nchọta na akaụntụ onye ngosi na izi ozi ngwa ngwa, nkesa akụrụngwa mgbasa ozi ndụ ka mma yana njikwa nke Center Exhibitor iji mee ka asọmpi azụmaahịa dị mfe karị. Ọrụ bara uru ma dịkwa mma, kaadị e-azụmahịa rụrụ ọrụ dị ka ọwa dị mkpa maka ndị ngosi ịnakọta ozi nke ndị na-azụ ahịa. E zigara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kaadị azụmahịa 80,000 site na webụsaịtị Canton Fair. Agbakwunyere mkpado “ahia nke ụlọ” n'ihe karịrị otu nde ngwaahịa, ndị na-azụ ahịa nwekwara ike iji naanị otu ọpịpị họrọ ngwaahịa ndị a. Anyị wepụtakwara akwụkwọ ntuziaka dị n'ịntanetị nke ndị ngosi mma na azụmaahịa ụlọ iji nyere ndị na-ebubata ngwaahịa na ndị na-azụ ahịa aka jikọọ ibe ha ngwa ngwa. Na mpaghara "Rural Vitalization", agbakwunyere mkpado pụrụ iche na ụlọ ọrụ 1160 nke mpaghara na obodo 22 maka egwuregwu ezubere iche.
Ọrụ nkwalite azụmaahịa dị iche iche lekwasịrị anya na mmetụta a na-ahụ anya. Anyị haziri usoro mmemme nkwado dị mma iji rụọ ọrụ Canton Fair nke ikpo okwu zuru oke nwere ọtụtụ ọrụ. A na-eme ihe omume 44 "Nkwalite na igwe ojii" na mba 32 na mpaghara gburugburu ụwa, ebe e nwetara mkpuchi zuru ụwa ọnụ na "Belt & Road" na mba RCEP lekwasịrị anya. Emere emume nkwekọrịta nkwekọrịta n'ịntanetị na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na azụmahịa iri dị ka Chamber of Commerce of Brazil (CCCB) na Chamber of International Commerce of Kazakhstan, na-agbasawanye netwọk Canton Fair. Anyị mere mmemme egwuregwu maka ndị na-ere ahịa X5 kasị ukwuu na Russia, ndị na-ere ahịa Kawan Lama Group nke Indonesia, na ndị na-ere ahịa America nke ise Kroger na ndị na-ebubata China, haziri nkwalite nke ụyọkọ mmepụta ihe dị ka Shantou ihe egwuregwu ụmụaka, Guangdong obere ngwa ụlọ, Zhejiang textile na Shandong nri ụlọ ọrụ. na-enye ọwa mkparịta ụka dị mma n'ịntanetị maka ihe ngosi ika 800 na ntọala ụlọ ọrụ ndị isi na-akwado ndị nnọchi anya azụmaahịa na ndị na-azụ ahịa dị mkpa iji chụpụ egwuregwu ezubere iche n'etiti ụlọ ọrụ ndị isi na ahịa mba ụwa. Mwepụta 137 ọhụrụ bụ nke ụlọ ọrụ 85 na-eduga nke ngalaba ngosi 40 sitere na ndị nnọchi anya azụmaahịa 20, na-ekpuchi ngwaahịa eletriki na eletrọnịkị, ngwaahịa ndị ahịa kwa ụbọchị na akwa na uwe. Anyị wepụtara 2020 CF Awards New Product Show iji gosipụta ngwaahịa ndị China dị mma nwere ihe ọhụrụ na uru azụmaahịa n'ụwa niile. Canton Fair PDC dọtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ 90 pụrụ iche sitere na mba na mpaghara 12 gụnyere France, South Korea, Netherlands, wee nye usoro ikpo okwu maka ngosipụta na nzikọrịta ozi oge niile iji nyere ụlọ ọrụ aka n'ịkwalite ogo, iwu ụlọ na ịchọgharị ahịa site na imepụta ihe ọhụrụ. na imewe.
Ọrụ nkwado zuru oke. Ụdị jikọtara ọnụ na-anọghị n'ịntanetị iji mesoo mkpesa nke IPR na esemokwu azụmaahịa ka emelitere iji hụ na nchedo IPR n'ogo dị elu. Edere ndị ngosi 167 na mkpesa IPR, yana ụlọ ọrụ 1 kpebisiri ike dị ka ihe mebere ebubo ebubo. Ụlọ ọrụ ego 7 nke ngalaba ọrụ ego ahaziri ngwaahịa pụrụ iche maka ndị ngosi. A gara leta ngalaba ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge 49,000, yana ihe mgbazinye ego karịrị 3,300 enyere yana ihe gbasara 78,000 nke mmezi na mkpokọta. Anyị na Bank of China Guangdong Alaka China haziri mmemme ego na-anọghị n'ịntanetị iji nweta nkwurịta okwu ihu na ihu na ụlọ ọrụ na-egosipụta ma nye ọrụ ego ezubere iche. A kwalitere ọrụ kọstọm n'ịntanetị iji duzie ụlọ ọrụ ka ha nweta uru zuru oke yana nke ọma na amụma ndị ikwu. A na-enye ọrụ azụmaahịa mba ofesi n'ụzọ jikọtara ọnụ, dị ka ọrụ nzi ozi, ụgbọ njem, nyocha ngwa ahịa, asambodo ịdị mma ngwaahịa, iji wuo ikpo okwu ọrụ “otu nkwụsị”. Anyị guzobe Mpaghara E-azụmahịa Cross-Border wee mee mmemme isiokwu ya bụ "Otu Tune, Shared View" iji jikọọ na nyiwe e-azụmahịa ma gbasaa uru na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Mpaghara 105 Cross-Border Comprehensive E-Commerce Pilot nke China ka ewepụtara ụwa. Anyị na-emeziwanye usoro mgbasa ozi, multilingual na 24/7 smart ahịa ahịa nke gosipụtara "nkwado ndị ọrụ gbakwunyere ọrụ smart" iji nye ọrụ dị mma maka ma ndị na-azụ ahịa na ndị ngosi.
Xu webatara na uru Canton Fair dabere na ntinye aka ya na mmekorita ahia ahia n'etiti China na ndi ozo nke uwa n'uzo ohuru, nkwuputa ahia ahia nke otu uzo na isi ihe maka ulo oru China na ndi ozo, ihe ndi ozo nke onye na-ere ahia na onye na-azu ihe, ihe omuma nke ulo oru. omume na ahia zuru ụwa ọnụ na ọrụ zuru oke. Ihe ngosi Canton akwalitela mmepe nke ụlọ ọrụ ihe ngosi China na nke mba ụwa, yana azụmaahịa mba ofesi nke China tolitere, azụmaahịa zuru ụwa ọnụ na uto akụ na ụba ụwa. N'ọdịniihu, anyị na Canton Fair ga-aga n'ihu na-eje ozi na atụmatụ mba China, imeghe ihe niile, mmepe ọhụrụ nke azụmahịa mba ọzọ na-akwalite, na nguzobe nke usoro mmepe ọhụrụ. Dị ka ihe ndị ụlọ ọrụ China na ndị mba ọzọ si chọọ, anyị ga-anọgide na-ebuli ọrụ anyị iji nyekwuo uru maka azụmahịa n'ụlọ na ná mba ọzọ.
Xu kwuru na ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'ụwa niile na-emepụta akụkọ dị mma na nke dị iche iche na 129th Canton Fair, na-akọ akụkọ ahụ ma gbasaa olu nke ngosi ahụ, si otú a na-emepụta echiche ọha na eze dị mma. Ọ tụrụ anya ịhụ onye ọ bụla na nnọkọ nke 130.